Jean-Pierre Bemba oo loo diiday inuu u tartamo doorashada madaxtinimo - BBC News Somali
Image caption Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Jean-Pierre Bemba
Guddiga doorashada waxay sheegeen in Bemba sababta magaciisa ay uga saareen liiska musharraxiinta ay tahay inay dambi kusoo oogtay maxakamadda dambiyada caalamiga.
Ka dib saacado ay wadahadalo ay albaabadu u xiranyihiin ay socdeen ayaa guddiga doorashada wuxuu ku dhawaaqay in 6 kamid ah 25-ka qof ee u tartamaysa xilka Madaxweynaha inaysan buuxinin shuruudihii looga baahna.
Dadkaasi waxaa kamid ah Jean-Pierre Bemba , Antoine Gizenga iyo Adolphe Muzto oo labaduda ra'iisul wasaare kasoo noqday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Bemba waxaa dhawaan maxkammada caalamiga ee ICC ay ku waysay inuu gaystay dembi dagaal kadib markii tobban sano u xabsi ku jiray.
Kiisaaka ay haysataye maxkammada caalamiga ee dembiyada waxaa kamid ahaa in u isku dayay in u laalusho marqaatiyaasha taas awgeed ayaana ah sababata guddiga doorashada ay ugu diideen inuu ka qayb gao doorashada.
Dowladda Congo: Qaramada Midoobay "Sawir qaldan ayay ka bixinaysaa Congo".
Dagaal dhexmaray ciidamada Uganda iyo kuwa Congo
Hay'ada WFP oo ka digtay xaalada bina'aadanimo ee dalka Congo
Musharraxiinta hadda u tartamaya doorashada waxay qabaan go'aan ah inay racfaan u gudbiyaan maxkamadda dastuuriga, dhibaatada taagan waxay tahay in garsoorayaasha maxakamadda loo arko inay u dhaw yihiin dhanka madaxweynaha islamarkaasna go'aanada kasoo baxa maxkamadda ay noqon kara kuwo loo leexiyay dhankiisa.
Su'aasha taagan waxay tahay, in Bemba uu qayb geli doono doorashada ama inuu go'aansan doono inuu taageeri doono hoggaamiye mucaarad oo kale.
Magacyada musharraxiinta ka qayb galyaso doorashada waxaa la filaya in shaaca laga bisha September.
Waa kuma Jean-Pierre Bemba?
Waa ganacsade, aabihiis Bemba Saolona wuxuu ahaan jiray ganacsade si wayn looga yaqaanay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
1998: Wuxuu caawimad ka helay dalka Uganda sii uu sameeyo jabhadda MLC.
2003: Wuxuu noqday madaxweyne ku-xigeen kaddib markii heshiis dhanka nabadda ha lagala saxiixday.
2006: Wuxuu ku guuldareystay doorasho madaxtinimo ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ka dhacday.
2007: Wuxuu u cararay dalka Belgium kaddib markii rabshado ay ka dhaceen magaalada Kinshasa.
2008: waxaa lagu xiray magaalada Brussels, waxaan lagu wareejiyay maxkamadda ICC.
2010: Waxaa bilaabatay dhageysiga dacwaddiisa.
2016: Waxaa lagu helay dambi dagaal iyo xuquuqda aadanaha.
2018: Waxaa lagu waayay dambigii loo haystay.